CADAADISKA MAQSIN: SIDA LOO SAMEEYO DABOOL - INFRASTRUCTURE
Marar badan, waxaan la kulannay arrinka kaydinta jiilaalka ee khudradda iyo waxyaabaha kale. Meelaha ugu fiican waa maqaasiinka, si kastaba ha noqotee, si alaabadu u socoto muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo hawo-qaadid wax ku ool ah. Maqaalka waxaan ku sheegi doonaa sida loo sameeyo moodada Maqsin.
Dabiiciga dabiiciga ah waa inuu lahaado laba tubo oo biyo ah. Waxaa ugu wanaagsan inaad isticmaasho tuubo galbeed ah ama tuubo asbestos ah markaad dhisto dhisme. Waxaa sidoo kale muhiim ah in si sax ah loo xisaabiyo dhexroorka: 1 mitir oo laba jibbaaran oo gareynta hoose ah waa in la siiyaa 26 mitir oo laba jibbaaran. fiiri aagga dhuumaha.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad barato sidii loo qalabayn lahaa hawo-mareenka saxda ah ee doofaarka.
Waxay lagama maarmaan u tahay hawo cusub si ay u soo gasho maqaasiinka. Si waxtar weyn leh, waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo geeska kaas oo ku yaala dhinaca ka soo horjeeda goobta rakibida ee daboolka.
Waa muhiim! Xulo meel aad ku rakibto qulqulka hawada ee hawada si markaa xilliga jiilaalka uusan ku dhicin baraf.
Dukuminti qaadashada hawada waa in la dhigaa si ay u dhammaato dhamaadka furan ee fogaan ah 40-60 cm dhulka. Waa inay si buuxda u dhex gelisaa saqafka oo kor u kacda xagga saqafka 80 cm.
Waad ku mahadsan tahay, ka soo baxa hawada dabiiciga ah ee miiska. Waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo geeska si marka ugu hooseysa ay hoos ugu dhigto saqafka. Waa in lagu qabtaa meel qumman ah iyada oo loo marayo maqaasiinka oo dhan, saqafka oo ka baxsan xadka xadigiisu yahay 50 cm.
Si loo ururiyo kondhiyeyn ama baraf yar, waa la waraabiyaa - mid kale ayaa la geliyaa, oo masaafada u dhexeysa waxaa ka buuxsami kara rinjiga.
Ogow dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka maqaasiin caag ah si su'aalo loo waydiiyo.
Hoos-u-dhiska Maqalka leh laba tubo ayaa lagu sameeyaa miisaan gaar ah oo ka mid ah hawada diiran ee gudaha iyo qabow ka baxsan.
Haddii ay isbeddel heerkulka weyni dhacdo, waxaa jira khatar ah in qabyo ah oo keenaya in lagu keydiyo maqaasiinka. Si looga hortago tan, inta lagu jiro dhismaha waxay isticmaalaan fureyaasha albaabka hawada hawada, taas oo u oggolaanaysa in la isku hagaajiyo wareegga hawada.
Si aad u hesho taariikhda, samee nidaamyada hababka hawo-qaadashada laba nooc: dabiici ah oo qasab ah. Doorashada hal ama mid kale oo doorasho ah ayaa saameeya mugga iyo qaabeynta qaybta hoose.
Naqshadeynta nidaamka qasabka ah waxaa ka mid ah tuubooyin, laakiin si loo hubiyo dhaqdhaqaaqa qasabka ah ee hawada, taageerayaasha waxaa lagu dhisay iyaga.
Ma taqaanaa? Ku saabsan baahida iyo faa'idooyinka hawo-qaadashada ayaa ogaa qarniyo badan ka hor. Si kastaba ha ahaatee, ka dibna ma jirin naqshado gaar ah - oo kaliya ayaa la sameeyey hawada.
Caadi ahaan, qiiqa duufaanku wuxuu u dhaqmaa sida goobta qalabka lagu rakibo. Iyada oo caawimadeeda, waxaa suurtagal ah in la gaaro faarax macmal ah oo maqaasiinka ah, taas oo ay ugu wacan tahay hawo cusub oo geli karta qolka hawada.
Iyada oo ku xiran mugga maqaasiinka, taageerayaasha awoodaha kala duwan ayaa la xushay. Haddii dhulka hoostiisa uu leeyahay qaabab adag, rakibaadda taageerayaasha waxaa laga sameeyaa labada kan. Markaad dhisayso qaan-sheegasho qasab ah, ma sameyn kartid adigoon gargaar ka helin takhasus kaas oo kaa caawin doona inaad saxdo xisaabinta gelitaanka iyo ka bixidda socodka hawada, dhexroorka qoryaha hawada loo baahan yahay iyo awooda taageerayaasha.
Fikradda ugu weyn ee abuurista dabiiciga ah dabiiciga ah waa in la xisaabiyo farqiga cadaadiska iyo heerkulka Maqalka iyo ka baxsan. Aad bay muhiim u tahay in si sax ah loo go'aamiyo meesha tuubooyinka la dhigayo. Way ka fiican tahay in la geliyo godadka hawada sare ee 25-30 cm dhulka, iyo qiiqa waa inaanay ka yarayn 10-20 cm santuuqa. Haddii aad hoos u dhigto, qoyaanka iyo caaryada ayaa dhawaan u muuqan doona saqafka.
Nidaamka dabaysha dabiiciga ah waxaa lagula talinayaa madoow yar oo leh hal qol.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato sababta aad u baahan tahay hawo-qaadid guriga hoyga ah.
Sidee loo xisaabiyaa?
Haddii aad go'aansato in aad moodo mashiinka ku dhejiso gacmahaaga, waa inaad si taxadar leh u bixisid xisaabinta la xidhiidha dhexroorka tuubooyinka.
Marka la dhiso xisaabin adag oo hawo-mareen ah iyo qaabab loo isticmaalo oo aan ku habboonayn naqshadeynta guriga. Waxaan ku talineynaa in aan la socono farsamo kaas oo ku habboon dhismaha hawo nadiif ah.
Waa muhiim! U hubso inaad daboosho furitaanka tuubada wax lagu xiro ee leh birta birta, sida iyada oo aan lahayn jiirka iyo cayayaanka ayaa geli kara maqaasiinka.
Waxaan u maleyneynaa in 1 mitir oo mitir ah oo aad u baahan tahay 26 mitir oo laba jibbaaran. fiiri qaybta gaaban ee tuubada. Waxaan xisaabeynaa dhexroorka qaanuunku waa inuu noqdaa, haddii qiyaasta miisaanka waa 3x2 mitir.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso aagga Maqsin:
Marka la eego saamiga aan qaadnay oo saldhig u ah, qaybta isgaadhsiinta ee kanalka tubada ayaa noqon doona:
Fiidkii kanaalka hawada ayaa lagu xisaabiyaa qaaciddada:
Lahaanshaha raadiye, waxaan xisaabin karnaa dhexroorka:
Digriyo 14 cm = 140 mm.
Haddii ay jirto hawo bixinta oo kaliya (qiiqa ayaa lagu sawiraa dillaac), qaybta isgoyska ee tuubada giraanta ayaa yareyn karta - qulqulka hawada leh dhexdhexaad ah 15 cm waa mid ku haboon.
Si loo hubiyo in sarrifka hawada wax ku ool ah, waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo barkada, dhexroorka taas oo ah 10-15% ka badan albaabka.
Wareegga qiiqa, qulqulka hawada leh ee dhexdhexaadiyaha soo socda ayaa ku haboon:
Dv = Dp + 15% = 140 + 21811 mm.
Ku rakibidda tubooyinka hawo qaadashada
Qaybtan, waxaanu ku sharxi doonaa sida si habboon loogu sameeyo hawo-qaboojinta Maqalka iyo waxa aad u baahan tahay inaad si gaar ah u fiirsato.
Xaggee meel loo dhigaa
Xerada hawo bixinta ayaa laga soo saaraa dhulka. Qaybta hoose waa in ay ku taallaa meel u dhow dabaqa maqnaashaha, meel fog 20-30 cm.
Si aad u rakibto tuubada qiiqa ah waxay doorataa geeska ka soo horjeeda hoose, ku hay meel u dhow saqafka. Mid ka mid ah barkiisa ayaa lagu soo bandhigaa saqafka saqafka.
Si loo hagaajiyo waxtarka naqshadaynta hawada, isticmaal talooyinka soo socda: ku dhaji faashad tuubbo ka sarreysa saqafka.
Markaad ku daboolatid tuubbo dabool leh, waxaad awood u yeelan doontaa inaad abuurto cadaadis fayoob leh adoo hufnaanta hirgelinta nidaamka hawo-gelinta kor u qaadi doono.
Ma taqaanaa? Masar hore, bilaabay inuu si firfircoon u codsan hawo. Priramid Cheops waxay leedahay tiro badan oo qallalan.
Wixii dhismaha daboolka sida caadiga ah waxay isticmaalaan qalabkaan:
Dhuumaha qashinka ah ee kaadida ah waxay aad u la mid yihiin kuwa dusha sare leh, taasina waa sababta ay u heleen magac isku mid ah. Qalabka labadaba waa kuwo aad u adag, oo leh kalsooni sarreeya iyo mudnaanta. Ku rakibidda tuubooyinka polyetylenka si fudud ayaa si madaxbanaan loo fuliyaa.
Marka la rakibayo nidaamka hawada, fiiro u yeelo waqtiyadaas:
Markaad ku xirayso nidaamka mashaariicda hore u dhammaatay, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso dalool gaar ah oo saqafka.
Iyada oo loo marayo daloolka waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo tuubada galay dhulka hoostiisa - waxay hawada ka qaadi doontaa. Ku rakib dusha sare, u dhow saqafka.
Qayb ka mid ah tuubada dibadda ah waa in kor loo qaado ugu yaraan 1500 mm kor ka sarreeya dhulka ama ka sarreeya saqafka.
Meelaha ka soo horjeeda hoose ee dhulka hoostiisa waxaa lagama maarmaan ah in laga dhigo daloolka saqafka oo ku rakib tuubbo sahay ah. Waa inay dhamaataa meel fog 20-50 cm dhulka.
Qalabka hawo bixinta waa inaanay ka badan saqafka. Waxay noqon doontaa mid ku filan si loo soo saaro 25 cm.
Marka la rakibayo tubbada gidaarka ee derbiga, waa lagama maarmaan in la dhejiyo daboolka dibadda.
Haddii guriga uu leeyahay dabka ama kariyaha, waa in tuubooyinka qiiqa lagu rakibaa meel u dhow shooladda.
Waa muhiim! Fayodhawr aan habboonayn ama hawo la'aan ayaa u horseedi doonta hawada dabeecadda ah, taas oo ay tahay in la geliyo guriga waxayna si xun u saamayn kartaa caafimaadka dadka. Si tan looga hortago, si joogto ah u hubi xakamaynta.
Ma jiraan wax adag in la rakibo nidaamka hawo-qaadista, waxa ugu muhiimsan waa in la raaco dhammaan xeerarka iyo talooyinka.
Talooyin iyo talooyin ku saabsan hawlgalka Maqsin
Si loo dhigo maqaasiinka xaalad fiican iyo cuntada dukaanka ku hay muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la daryeelo microclimate. Aad bay muhiim u tahay in lagu hayo qoyaanka hoose ee dhulka hoostiisa. Si arrintan loo sameeyo, si joogto ah u qaboojiya qolka. Xilliga kuleylaha, waxaa lagu talinayaa in albaabbada iyo qashin-furayaashu ay furaan. Gustsaska dabayshu kulushahay si dhakhso ah u daadi maqaarka.
Waxaa jira xaalado marka ay lagama maarmaan tahay in la kordhiyo heerka qoyaanka. Tan waxaa lagu gaari karaa adigoo biyo ku buufinaya dhalada buufin leh, boodh qoyan ayaa sidoo kale la dhigayaa dabaqa. Waxaad ku dhejin kartaa sanduuq buuxa oo qoyan oo qoyan - tani waxay sidoo kale kaa caawineysaa kor u qaadista qoyaanka. Haddii aad rabto in qallooca si ay uula dhaqmaan shaqadooda caadiga ah, waa inaad hubisaa xaaladaha soo socda:
Nuur la'aan. Nalalka korontada waa in loo rogaa marka ay dadku soo galaan dhulka hoostiisa.
Heerkulka hawada oo hooseeya. Ha u oggolaan heerkulka sare Maqsin.
Joogitaanka hawo cusub oo nadiif ah. U diyaari qolka, la soco hawlgalka caadiga ah ee habka hawada.
Qoyaan. Waxaa lagu talinayaa in lagu hayo qoyaanka hawada 90%.
Ku hoggaansanaanta sharciyadan waxay saameyn ku yeelaneysaa kaydinta cuntada.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato xeerarka kaydinta miraha, qajaarka, yaanyada, basasha.
Hubinta nidaamka huurka
Ka dib marka la rakibo hawo-qaadidda, waa lagama maarmaan in la hubiyo waxtarkeeda:
Warqad khafiif ah oo warqad ah ayaa lagu daboolayaa tuubada biyaha. Haddii aad dareentid in ay wadato, markaa nidaamku wuu shaqeynayaa, hawada ayaa galaya qaybta hoose.
Ku nadiifi xaashida baaldi birta oo ku dhaaf mariinka. U fiirso jihada qiiqa - waa inay ku tiirsan tahay shooladda.
Waad ku mahadsantihiin hababka fudud ee aad ku ogaan kartid waxtarka nidaamka hawada.
Ma taqaanaa? Isticmaalka hawo-qaadashada ugu horreysa ee dib loogu celiyo 1734.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo sameeyo daboolka hoose ee gacmahaaga. Dhacdadu ma aha mid aad u adag oo aan xitaa wax dhisin.